Mareykanka oo soo saaray digniin la xiriirta Banaanbaxa ka dhacaya Muqdisho - Awdinle Online
Mareykanka oo soo saaray digniin la xiriirta Banaanbaxa ka dhacaya Muqdisho
Mareykanka ayaa digniin ka soo saaray bannaanbaxa Midowga Musharaxiinta ay qorsheynayaan in maalinta Jimcaha ku qabtaan taalada Daljirka Dahsoon ee Magaalada Muqdisho.
Safaaradda Mareykanka ee Magaalada Muqdisho ayaa goor dambe oo xalay ahayd soo saartay qoraal muwaadiniinta Mareykanka looga digayo inay ku lug yeeshaan bannaanbaxaasi, marka la eego baa qoraalka lagu yiri halista dembiyada rabshadaha wata
“Bannaanbaxyada ayaa la fillayaa inay dhacaan Jimcaha, 19-ka February 2021, saacaddu markay tahay 8:00 subaxnimo illaa 2:00 duhurnimo, taalada Daljirka Dahsoon ee Magaalada Muqdisho. Musharixiinta mucaaradka ee u taagan xilka Madaxweynaha ayaa ku baaqay mudaaharaad looga soo horjeedo Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) iyo dib u dhaca ku yimid hawlaha doorashooyinka dalka. Marka la eego halista dembiyada rabshadaha wata iyo kacdoonka shacabka, muwaadiniinta Mareykanka waa inay ka foggaadaan bannaanbaxyadan iyo wax kastoo la xiriira bannaanbaxa.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Safaaradda ayaa muwaadiniinta Mareykanka ugu yeertay in ay ka fogggaan goobta mudaaharaadka, meelaha dadku ku badan yahay iyo in si dhow ula socdaan Warbaahinta gudaha.
Sidoo kale waxaa la faray inay haystaan, oo ay diyaarsadaan dokumentiyadooda, isla-markaana ay yeeshaan qorsheyaal dib u laabasho ah, iyagoo aan ku tashaneyn kaalmada Dowladda Mareykanka.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa wada abaabul ballaaran, oo bannaanbax ka dhan ah dhammaadka muddo xileedka Madaxweyne Farmaajo uga qabanayaan taalada Daljirka Dahsoon, 19-ka bishan oo berrito ku beegan.
Wasiirka Amniga, Xasan Xundubey Jimcaale ayaa Arbacadii sheegay in aanu jirin wargelin rasmi ah, oo Dowladda Federaalka la soo gaarsiiyay. Wasiirka ayaase xusay in sharciga dalka uu shacabka siinayo xaqa ay fekerkooda ku soo bandhigi karaan, balse aan la ogolaan karin kulan dadweyne, iyadoo markaasi laga foggaanayo faafitaanka xanuunka COVID-19.
Midowga Musharaxiinta ayaa xalay ku celiyay in Jimcaha ay qaban doonaan isu soo baxoodaan, oo ay ku sheegeen in uu yahay mid nabadeed, iyagoo shacabka ugu baaqay in ay afgashiga soo xirtaan, isla-markaana ay ciidamada ammaanka ka doonayaan inay suggaan ammaanka goobta, kana foggaadaan in dano gaar ahi loo adeegsado.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo ka jawaabay Go’aankii dowladda
Next articleDFS oo shaacisay in qalab looga hortago COVID-19 gaarsiineyso dowlad Goboleedyada